FANONDRANANA OLONA AN-TSOKOSOKO : NIDOBOKA AM-PONJA NY TELO TAMIN’IREO DIMY VOASAMBOTRALa dépêche de Madagascar
La dépêche de MadagascarFiainam-pirenena MALAGASY PEJY MALAGASYFANONDRANANA OLONA AN-TSOKOSOKO : NIDOBOKA AM-PONJA NY TELO TAMIN’IREO DIMY VOASAMBOTRA
FANONDRANANA OLONA AN-TSOKOSOKO : NIDOBOKA AM-PONJA NY TELO TAMIN’IREO DIMY VOASAMBOTRA
Omaly maraina no niatrika ny fampanoavana teny Anosy ireo andian’olona voarohirohy ho mpandefa olona an-tsokosoko any Arabie Saoudite. Telo mianadahy no nalefan’ny fitsarana nisazy vonjimaika eny Antanimora noho ny fandraisan’izy ireo anjara mivantana tamin’ilay fandefasana olona any ivelany.
“Ireo vehivavy roa no atidoha nikotrika ny fampiantranoana ireo olona fitahina, ary lehilahy mpandrebireby ireo ankizivavy no tsy afa-maina tamin’ity raharaha ity noho ireo porofo tsy azo nialàna”, araka ny vaovao voaray avy eo anivon’ny Polisim-pirenena.
Fandrebirebena sy lainga tsara lahatra mantsy no fantatra fa nahafahan’izy telo mianadahy ireo nanangona olona tao an-tranony. Ary tsy misy avy eto Antananarivo ireo lasibatra fa tovovavy avy any amin’ny faritra avokoa. Nahatratra fito mirahavavy moa araka izany no efa nampiomanin’izy ireo hiondrana any Arabie Saoudite, saingy izao tra-tehaka izao.
Ireo antotan-taratasy manamarina ny fandehanana any am-pita sy ny taratasy mirakitra ny toe-pahasalamana avy amin’ny mpitsabo moa no isan’ireo porofo tsy nahafahan’ireo olon-dratsy ireo.
Ankoatra azy telo mianadahy izay nogadraina mandra-piandry ny raharaham-pitsarana anefa dia, afaka vonjimaika ireo namany mirahavavy. Ny tsy fahampian’ny porofo tamin’ny fandraisan’izy ireo anjara tamin’ity fikasana hanondrana olona ity no naha isan’ny tsy nandefasana azy ireo eny Antanimora. Tsy voalohany moa ny tranga toa izao no nisy, satria araka ny tatitra nataon’ny teo anivon’ny Polisim-pirenena dia, tambajotra roa izao, hatramin’ny fiandohan’ny taona, no ravan’izy ireo.
Partager la publication "FANONDRANANA OLONA AN-TSOKOSOKO : NIDOBOKA AM-PONJA NY TELO TAMIN’IREO DIMY VOASAMBOTRA"